Mapato Owirirana Kuwedzerwa kweNguva yeKunyoreswa kweVavhoti
Chivabvu 10, 2013
HARARE — Mapato ezvematongerwo enyika anoti anoda kuti nzvimbo dziri kunyoreserwa vanhu sevavhoti dziwedzerwe uye kuti chirongwa ichi chiwedzerwe nguva nepamusana pekusafamba zvakanaka kwachiri kuita pari zvino.
Komisheni inowona nezvekufambiswa kwesarudzo, yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, yaudzwa neChishanu zvichemo izvi pamusangano wayaita nemapato ezvematongerwo enyika.
Vachitaura pamusangano uyu, munyori anowona nezvesarudzo muMDC-T, Va Sesil Zvidzai, vati bato ravo harisi kufara nekuti nzvimbo dziri kunyoreserwa vanhu sevavhoti dzakawanzwa munzvimbo dziri kufungidzirwa kuti dzine vanhu vakawanda vanotsigira Zanu PF.
Mabharani mukuru wenyika, VaTobaiwa Mudede, avo vanga varipowo pamusangano uyo, vati nzvimbo dziri kunyoreserwa vanhu inzvimbo dzagara dzichingoshandiswa pakuvhota nguva dzose.
Asi murongi wemisangano muMDC-T, Va Nelson Chamisa, varamba kutambira mashoko aya vachiti pane chikiribidi chiripo.
Vanowona nezvesarudzo mMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube, Muzvare Ellen Shiriyedenga, vatiwo veruzhinji vari kusangana nematambudziko akawanda pavanenge vachida kunyoresa sevavhoti.
Munyori anowona nezvekuchengetedzeka mu Zanu PF, Va Sydney Sekeramayi, vaudzawo musangano uyu kuti bato ravo harisi kufara nekusawanikwa kwevanomirira ZEC pamwe nekushomeka kwenzvimbo dzekunyoresera.
Sachigaro weZEC, Amai Rita Makarau, vati komisheni yavo ichagara pasi nebazi rinowona nezvekunyoreswa kwevanhu sevavhoti nechinangwa chekuedza kugadzirisa matambudziko ese ari kusangana nevanhu pakunyoreswa kwevavhoti.
Vatiwo pane mukana wekuti chirongwa ichi chipfuudzirwe mberi pakatarisa kunonoka kutanga kwachakaita, matambudziko avari kusangana nawo pakunyoreswa kwevanhu sevavhoti, pamwe nebumbiro idzva remitemo yenyika iro risati rasainwa kuva bumbiro remitemo yenyika.